Xarunta dayax -gacmeedka ganacsi ee ugu weyn adduunka oo laga dhisi doono Florida
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Dalxiiska Hawada » Xarunta dayax -gacmeedka ganacsi ee ugu weyn adduunka oo laga dhisi doono Florida
Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Investments • News • Dadka • Waajib ah • Dalxiiska Hawada • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Xarunta waxaa laga dhisi doonaa Launch and Landing Facility (LLF) oo ku taal Jasiiradda Merritt, Florida waxayna ka koobnaan doontaa toban suun oo otomaatig ah oo la kordhiyay oo awood u leh inay soo saaraan kumanaan nooc oo baabuurta bannaan ah sannadkiiba.
Guddoomiyaha Gobolka Florida Ron DeSantis ayaa ku dhawaaqay in Terran Orbital uu $ 300 milyan ku maalgelin doono Florida.
Xarunta 660,000 square square Terran Orbital waxay ka abuuri doontaa ku dhawaad ​​2,100 shaqooyin cusub Florida.
Goobtu waxay ahaan doontaa meesha ugu weyn uguna horumarsan adduunka “Warshadaha 4.0” oo ah goob wax soo saar baabuur.
Terran Orbital, oo ah shirkad xalka dayax -gacmeedka, oo iskaashi la leh Space Florida, maamulka hawada sare iyo maamulka horumarinta hawada ee Florida, ayaa ku farxay inay maanta ku biiraan Guddoomiyaha Gobolka Florida Ron DeSantis markii uu ku dhawaaqay Terran Orbital horumarinta qorshaysan ee adduunka ugu weyn uguna horumarsan “Warshadaha 4.0” xarunta wax soo saarka baabuurta. Xarunta waxaa laga dhisi doonaa Launch and Landing Facility (LLF) oo ku taal Jasiiradda Merritt, Florida waxayna ka koobnaan doontaa toban suun oo otomaatig ah oo la kordhiyay oo awood u leh inay soo saaraan kumanaan nooc oo baabuurta bannaan ah sannadkiiba.
Xarunta 660,000 cag laba jibbaaran waxay ka muuqan doontaa silsiladda sahayda AI ee kontoroolka AI ku saleysan oo u saamaxaysa Terran Orbital inay ilaaliso sumcaddeeda caanka ah ee hubinta hawlgalka iyo qancinta macmiilka. Xaruntu waxay kaloo ku faani doontaa daabacaadda 3D iyo teknolojiyadda wax -soo -saarka si loogu oggolaado in si deg -deg ah baabuur meel bannaan loo geeyo suuqa, iyo sidoo kale awooda lagu soo saaro laguna been abuuro tayada ugu sarreysa, farsamo ahaan horumarsan, shirka guddiga wareegga daabacan oo leh bakhaarro elektiroonig oo ballaaran. Intaa waxaa dheer, xaruntu waxay adeegsan doontaa khadadka wax soo saarka xoogsatada ee la kordhiyay oo la caawiyay si ay u soo saaraan qalab badan oo elektiroonig ah iyo farsamo oo adag.
"Waan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in Terran Orbital uu $ 300 milyan ku maalgelin doono Xeebta Space si loo dhiso xarunta ugu weyn ee wax soo saarka dayax -gacmeedka adduunka," ayuu yiri Guddoomiyaha DeSantis. “Soo -saaridda dayax -gacmeedku waa ayna sii ahaan doontaa qayb muhiim ah oo ka mid ah dhaqaalaha Xeebta Space -ka, iyada oo ogeysiiskan aan kor u qaadnay ante. Florida waxaan ku socon doonnaa inaan hormuud ka noqonno booska annagoo maalgelinayna kaabayaasha, tababbarnna shaqaale xirfad sare leh iyo joogtaynta jawi dhaqaale oo u oggolaanaya shirkadaha sida Terran Orbital inay horumar sameeyaan. Waxaan ugu hambalyeynayaa go’aan weyn oo ay ku yimaadeen Florida. ”
Waan ku faraxsanahay inaan iskaashi la sameyno Booska Florida si aan u dhisno xarun aan u aragno inay tahay hanti qaran: kaalin ganacsi ahaan lagu maalgeliyo saldhigga warshadaha ee dalkeenna. ” ayuu yiri Marc Bell, aasaasaha iyo madaxa fulinta Terran Orbital. “Kaliya maahan inaan awoodi doonno inaan ballaarinno awooddeena wax -soo -saarka si aan u daboolno baahida sii kordheysa ee badeecadahayaga, laakiin waxaan sidoo kale u keeni doonnaa Gobolka Florida fursadaha wax -soo -saarka iyo kartida qiimaha leh ee Gobolka Florida, annagoo ku maalgelin doona in ka badan $ 300 milyan dhisme iyo qalab cusub. Dhamaadka 2025 -ka, waxaan abuuri doonnaa ku dhawaad ​​2,100 shaqooyin cusub oo celcelis ahaan mushahar ahaan ah $ 84,000. ”
"Booska Florida wuxuu ugu hambalyeynayaa Terran Orbital xulashadiisa Florida iyo Xaruntayada Launch and Landing ee Xarunta Space ee Kennedy (KSC) oo loogu talagalay dhismaha cusub ee dayax -gacmeedka, ”ayuu yiri Madaxweynaha iyo Maamulaha Shirkadda Space Florida Frank DiBello. “Ku dhawaaqitaankani waa mid kale oo muhiim u ah hoggaanka Florida ee ganacsiga hawada sare, oo bixinaya horumarin heer sare ah, oo ay ku jirto soo-saaris-dalbasho iyo karti-ku-dalbasho awood-u-lahaanshaha ee dayax-gacmeedka. Waxaan rajeyneynaa in Terran Orbital uu ku guuleysto sanadaha soo socda iyo howlaha sii socda iyo koritaanka Florida ”